म्यानचेस्टर सिटीलाई जिल्लाउँदै सान्चेजलाई म्यानचेस्टर युनाइडेडले अनुबन्ध गर्दै ! – Medianp
म्यानचेस्टर सिटीलाई जिल्लाउँदै सान्चेजलाई म्यानचेस्टर युनाइडेडले अनुबन्ध गर्दै !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, पुष २९, २०७४०८:१०
काठमाडौं, २९ पुस । आर्सनलका स्टार स्ट्राइकर एलेक्स सान्चेजलाई अनुबन्ध गर्न दुई म्यानचेस्टरको होड देखिएको छ । लामो समयदेखि म्यानचेस्टर सिटीको नजरमा रहेका चिलीका सान्चेजलाई पछिल्लो समय युनाइटेडले अनुबन्ध गर्ने सम्भावना बढेको बताइएको छ ।
आर्सनलले सान्चेजलाई अनुबन्ध गर्न ३५ मिलियन पाउण्ड तिर्नुपर्ने बताएको छ । सान्चेजका एजेन्टले अनुबन्धबापत आफूले थप पाँच मिलियन पाउनु पर्ने बताएका छन् ।
यसरी हेर्दा सान्चेजलाई अनुबन्ध गर्न चाहने क्लबले उनका लागि समग्रमा ४० मिलियन पाउण्ड खर्चिनुपर्नेछ । यो म्यानचेस्टर सिटीले तिर्न चाहेको भन्दा दोब्बर हो । म्यानचेस्टर युनाइटेड भने राम्रो खेलाडीका लागि बढी रकम पनि खर्चिन तयार रहेको बताइएको छ ।
युनाइटेडका प्रशिक्षक मोरिन्होले सान्चेज अभूतपूर्व खेलाडी रहेको बताउँदै उनलाई अनुबन्ध गर्न आफु, युनाइटेडको बोर्ड र लगानीकर्ताहरु तयार रहेको बताएका छन् । सान्चेजलाई फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट–जर्मेन (पिएसजी) ले पनि अनुबन्ध गर्न चासो देखाएको छ ।
मौसमभन्दा चिसो राज्य, केन्द्रमा थन्कियाे ३ अर्ब
प्रधानन्यायाधीश भन्छन्- ‘प्रमाणपत्र देखाउन आवश्यक छैन, सडकको नाराबाजीले फरक पर्दैन’
अर्जेन्टिनाका पूर्व प्रशिक्षक साम्पाओलीले भने, ‘म अर्जेन्टिना भन्दा ब्राजिलको प्रसंसक हुँ, ब्राजिलको प्रशिक्षक बन्न चाहान्छु !’
च्याम्पियन्स लिगः पिएसजी समुह विजेता बन्दै नकआउट चरणमा